Nhau - Chii chandinofanira kuita kana iyo yekuzvivharira wega yekuisa pfuti isingakwanise kuzvisimbisa?
Chii chandinofanira kuita kana iyo yekuzvivharira yega yekuisa pfuti isingakwanise kuzvisimbisa?
Kunyangwe iyo pfuti yemafuta mumotokari yemafuta inogona kuzvisimbisa inoenderana zvakanyanya nekuti iyo yekuchengetera kamuri inogona kuumba yakakwana vacuum. Naizvozvo, kana iyo refueling pfuti isingakwanise kuzvisimbisa-yega, inofanirwa kugadziriswa zvakanyanya maererano nemazano anotevera:
1. Tarisa kana chisimbiso pajoinhi pakati pedhiramu nemuviri wepfuti hwakavimbika. Tarisa kana O-mhete yakanganisika pakabatana. Kana yakakuvara, inogona kutsiviwa mushure mekutsiva.
2. Kana paine chinhu chekune imwe nyika pane iyo taper pevhu yebarrel cone vharuvhu, bvisa dhiramu uye bvisa tsvina uye woidzosera.
3. Tarisa kamuri rekutsvaira kuti rakabuda here. Kana chifukidziro chevhavha, iyo diaphragm yakavhunika kana sikuruu yekukiya isiri panzvimbo, bhavha haigone kuumbwa uye kuzvisimbisa.
4. Iyo diki yekuyerera mwero haisi yekuzvisimbisa-wega: mune diki kuyerera kuyerera, kuyerera kwemvura yakadzikira yakadzika, inoyerera kuyerera suction mhedzisiro haina kusimba, iyo yekuvhura kamuri haigone kuburitsa yakakwana vacuum, uye chitubu simba reiyo chitubu hachigone kukundwa kuita kuti pfuti yemafuta izvisunge.
5 Kana iwe uchinzwisisa musimboti unoshanda uye kushandisa kwepfuti-yekuzvishongedza wega pfuti, unogona kutibata, tinokupa mhinduro inogutsa.
Post nguva: Sep-25-2019